असल अभिभावकको खोजी — News of The World
असल अभिभावकको खोजी
धनबहादुर गुरुङ,स्पेनफागुन २९, २०७५
क्रिश्चियन धर्मको प्रचार–प्रसार गर्ने एउटा अमेरिकन मित्र डेविड कूले संग मेरो चिनजान भयो । २००२ मा स्पेन आएदेखीबाट स्पेनको बार्सेलोना शहरमा मेट्रो भित्रको भिड– भाडमा छोटो परिचयपछि उनले मलाई आफ्नो चर्च (क्रिश्चियनहरूको मन्दिर) लगे ।
नियमित भेटघाट पछि त्यो चर्चभित्र उनको र मेरो लामै गफ हुन्थ्यो । ४८ वर्षे उनी त्यस्तै दार्शनिक कुरा गर्नेमा सिपालु थिए । एकपटक कुराको प्रसंगमा मैले भने ‘हाम्रो देश नेपालमा त तिमीहरूले आफ्नो क्रिस्चियन धर्मको ब्याख्या गरेर मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउने अभियानमा लागेको छ भन्छन नि, के यो साँचो हो ?’ उनले आफ्नो औली हल्लाउदै भने ‘त्यस्तो होइन ।’ उनले भन्दै गए, हेर्नु होस्, संसारमा आज कति आतंक मच्चिरहेको छ.. । जताततै अशान्ति छाइरहेको छ… । भगवान जिसस क्रिस्टले तिमि हामी मानब जातिप्रति दिनुभएको उपदेशहरूको प्रचार गर्नु हो । कसैलाई क्रिस्चियन बनाउन लाई होइन । तिमि र मेरो परिचय भएको यतिधेरै समय भयो । तर तिमिलाई मैले क्रिश्चियन हुनु पर्छ भनेको छु र ?
उनले भनेको एउटा शब्दले भने मलाई बर्षौदेखि नै सताई रहेको थियो । जब मैले उनलाई प्रशंसा गर्दै भने, ‘तिमि अमेरिकनहरू त कति भाग्यमानी !
विश्वको सात अरब मानिसहरूको सपनाको देश.. विश्वकै एउटा नमुना देश अमेरिका…, तिमि त आफूलाई अमेरिकन नागरिक हुँ भन्दाखेरि गर्ब गर्छौ होला नि ? तब उसले मेरो प्रश्नको जवाफमा भनेको थियो, ‘हे, धन, अहिलेको हाम्रो वर्तमान राजनैतिक नेताहरूहरू त्यति राम्रा छैनन् । यो भन्दा पहिलेको नेताहरू राम्रा विचारका थिए । पहिलेको हाम्रो नेताहरू अमेरिकाको सच्चा अभिभावक थिए । जसरि एउटा परिवारमा, समाजमा बाबा आमा अभिभावक भएर परिवार अनि समाजलाई मार्ग दर्शन गर्छन । सहि दिशा दिन्छन र उसको भबिष्य राम्रो हुन्छ । तिमीलाई थाह छ होला, अमेरिकाको स्थापनाको समयमा हामीले धेरै राम्रो अभिभावकहरू पायौ । तिनीहरू हाम्रो सच्चा अभिभावक थिए । हाम्रो देशको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन डीसी, थोमस जेफ्र्फोन, जोहन अदाम्स,जमेस मोनरे र पछि अब्राहम लिंङकन जस्ता नेताहरू जो हाम्रो देशका सच्चा अभिभावकहरू थिए ।
ती अमेरिकी मित्रले पटक–पटक प्रयोग गरेका यसै शब्द ‘अभिभावक’ले मलाई धेरै प्रश्नहरूले सताउन थाल्यो । ती सन्तले भनेको, यो अभिभावक शब्दभित्र कति जिम्मेवारी अथवा कर्तब्यहरू लुकेका छन् । देशको स्थापनाकालको शुरुवातिको बेलामा नै अमेरिकाले सहि अभिभावकको नेतृत्व पाएर आज अमेरिका अमेरिका बनेको हो भन्ने ति सन्त मित्रको भनाइ थियो । फलस्वरूप आज हामीले देखिरहेका छौ अमेरिका लगायत युरोपभरीकै देशहरूमा आफ्नो देशलाई निर्देशन गर्ने अभिभावक । त्यहाँ देश चलाउने अभिभावक कति सजग छन्, कति सतर्क भएर यिनीहरूले आफ्नो देशको अभिभावकत्वको जिम्म्ेवारी पूरा गरेका छन् भनेर गहन सोचाइमा डुब्दा डुब्दै म हाम्रो देश र समाजमा पुगे ।
आफ्नो परिवारको अभिभावकत्व कस्तो हुनुपर्छ यो त हामी सबै नेपालीहरूले राम्रैसँग जानेको र बुझेको हुनुपर्छ । तर मेरा अमेरिकी मित्रले भनेजस्तै आफ्ना जनतामाथिको अभिभावकत्व कसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जान्नलाई हामी नेपालीहरूले यो युरोप, अमेरिका देशहरूबाट बुझ्न सिक्न पर्छ कि जस्तो लाग्छ । नेपाललाई युरोपको स्वीजरल्याण्ड तथा एसियाको सिंगापुर जस्तो बनाउँछु भनेर फलाक्ने हाम्रा नेताले आफ्ना जनतामाथिको अभिभावकत्वको जिम्म्ेवारी कसरी पूरा गर्नुपर्छ भनेर पनि यहिबाट सिक्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो परिवार, समाज र देश हाँक्ने जिम्मा लिने अभिभावक राम्रो भयो भने मात्र, समाज अनि देश राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण युरोपका विभिन्न देशका नेताहरूबाट पनि लिन सकिन्छ । जहाँ विश्वभरीका हजारौ हजार मानिसहरू आफू र आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भबिष्यको सपना देखेर युरोप छिरेका छन् । यहाँ केही हदमा सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पनि हाम्रा नेपालीले नेतृत्व दिएर नेपाल र नेपालीको उदाहरण देखाइसकेको पाइन्छ ।
उनीहरूको उदार दिल र समान कानुनको कारण हाम्रा नेपालीहरू युरोप र अमेरिकी देशमा त्यहाँको स्थानीयतहको नेतामात्र नभएर केन्द्रमा पनि जिम्म्ेवारी बहन गर्न अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
हाम्रो देश नेपालमा भने गतिलो अभिभावक नपाएकोले नै आज हाम्रो गाउँघरको त्यस्तो हालत भएको छ । जहाँ विकासको नाममा विनास मात्र भएको पाइन्छ । जनताले सामान्य रुपमा पनि आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । हाम्रो देश स्थापनाकालमा नै यस्तो अभिभावकको हातमा पर्यो कि त्यो बारेमा मैलै भनिरहनु पर्र्दैन् । म जन्मिएको देहरादुनको सुन्दरता नेपालको भन्दा कम छैन, तर मेरो माता–पिता,सारा सन्तान, पुख्र्यौली सबै नेपालीनै भएको हुनाले म नेपाली नै हु र मेरो देश नेपाल हो । चाहे मेरो देश जति नै गरिब, पीडित, अविकसितनै किन नहोस् !
संसारले कति फड्को मारी सक्यो । १९ वर्षदेखि मैले यरोपियन र अमेरिकन नागरिकसँग सँगै कामगर्ने र नजिक रहेर उनीहरूको जीवनशैली हेर्नेगरेको छु । जर्मनी, डेनिश, स्विडिस, नर्वेजियनन र यी स्पेनिश मित्रहरूलाई । जब पहिलो दिनमा म नेपाली हुँ भनेर थाहा भयो, उनीहरूको मुहारमा खुसी झल्किन्थ्यो । ‘ओ नेपाली… नेपाल… ।’ काम गर्दागर्दै एक सेकेन्ड रोकिएर हेर्थे उनीहरू मलाई ।
त्यति राम्रो देश… (सो व्युटिफूल कन्ट्रि) भनेर मेरो देशको प्रसंसा गर्थे । विशेष त नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतासँग परिचित उनीहरू त्यसैले पनि मेरो देशको प्रशंसा गरेर थाक्दैनथे । प्राकृतिक सुन्दरतामा हाम्रो देश अमेरिका र युरोप भन्दा पनि अगाडि छ । तर, विडम्वना, मेरो देशले राम्रो अभिभावक पाउन सकेको छैन । ती प्राकृतिक सुन्दरताले मन मात्रै होइन देशै सिंगारेर विश्व मानचित्रमा नेपालको नाम ‘वाह नेपाल’ भन्ने बनाओस्, यस्तो अभिवाकत्वको खोजी छ ।
अमेरिकन र युरोपियन जनताले आफ्नो देशलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा अर्थात् देशको अभिभावक एउटा जिम्मेवार र सक्षम मानिसलाई चुनेर दिएका हुन्छन् । उनीहरू विभिन्न चुनौतीको सामना गरेर मात्र त्यो देशको नेता बन्न सक्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो नेताको कमि छ भनेर भन्दिन म । सक्षम, अनुभवी, कुशल र इच्छाशक्ति भएको नेताहरू धेरै छन् । तर त्यहाँको तौर तरिका तथा आपसी खिचातानी अनि जे कुरामा पनि हुँदैन र सकिदैन भन्ने मानसिकताको शिकार भएको हाम्रो समाज त्यसले गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने मौका नपाइरहेको देखिन्छ ।
एउटा कुशल, इमान्दार र इच्छाशक्ति भएको मानिसले अवसर पायो भने के गर्न नसक्दो रहेछ त भन्ने एउटा उदहारण हुन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बर्तमान महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङ । नेपालमा बत्ति नआउदा नेताहरूले आफ्नो भाषणमा भन्ने गर्थे, ‘अब को ६ वर्षभित्रमा नेपालमा लोड सेडिंङ हट्छ’ अर्का नेताले भन्थे, ‘अबको २ वर्ष भित्रमा नेपालमा लोड सेडिंग समाप्त हुन्छ.. तर एक सक्षम अनि इमान्दार राष्ट्रको पहरेदारको हातमा प्राधिकरण पर्नासाथ नेपाली जनताले उज्यालो तथा राहतको सास फेर्न पाएका हुन भन्दा फरक पर्दैन् । त्यसैले देशमा कुलमान जस्तै धेरै अभिभावकको खाँचो छ । अनिमात्र नेपाललाई संसारकै सुन्दर देश बनाउन सकिन्छ । हामी नेपाली जनताले पनि अब त्यस्तै कुशल नेता निर्माण गर्न तथा खोजीमा लाग्ने कि ?
पर्वत चित्रे, कालठुरा, हाल स्पेन
बारलाई भातृ संस्था बन्न बाट रोकौ
२०७५ चैत्र १० आइतवार- १६ शनिवारसम्मको राशिफल
मुद्धामा निरन्तर सुनुवाई (Continuous hearing) कसरी गर्ने ?